2 Samuel 1 NVI - 2 Samuel 1 AKCB
Dawid Te Saulo Wu
1Saulo wu akyi no, Dawid san fii nkonim a odii Amalekfo so no mu bɛtenaa Siklag nnaanu. 2Ne nnansa so no, ɔbarima bi fi Saulo nsraban mu a watetew ne ntade mu, atu mfutuma agu ne ti mu, de rekyerɛ sɛ ɔretwa adwo bae. Oduu Dawid nkyɛn no, ɔdan ne ho hwee fam nidi mu.
3Dawid bisaa no se, “Ɛhe na wufi?”
Obuae se, “Maguan afi Israel nsraban mu.”
4Dawid bisaa no se, “Na ɛyɛɛ dɛn? Ɔko no kosii dɛn?”
Ɔkae se, “Mmarima no guan fii akono. Bebree totɔe. Na Saulo ne ne babarima Yonatan nso atotɔ.”
5Enti Dawid bisaa aberante a ɔbɛbɔɔ no saa amanneɛ no se, “Ɛyɛɛ dɛn na wuhuu sɛ Saulo ne ne babarima Yonatan awuwu?”
6Aberante no buae se, “Mikofii Gilboa bepɔw so, na mekɔtoo sɛ Saulo sɛn ne peaw so a atamfo no nteaseɛnam ne nʼapɔnkɔsotefo mmɛn no ara. 7Ɔdan ne ho a ohuu me no, ɔteɛɛ mu frɛɛ me se memmra. Mibisaa no se, ‘Menyɛ dɛn?’
8“Obisaa me se, ‘Wo ne hena?’
“Mibuaa no se, ‘Meyɛ Amalekni.’
9“Na ɔsrɛɛ me se, ‘Begyina me so na kum me, na me ho yeraw me yiye, na mepɛ sɛ me wu.’
10“Enti migyinaa ne so kum no, efisɛ na minim sɛ tebea a ɔwɔ mu no, ɔrennya nkwa. Na mituu nʼahenkyɛw a ɛhyɛ no no ne nʼabasa so atweaban no sɛ mede rebrɛ wo, me wura.”
11Dawid ne ne mmarima no tee asɛm no, wɔde awerɛhow sunsuan wɔn ntade mu. 12Wotwaa ho agyaadwo, sui, bua daa da mu no nyinaa wɔ Saulo ne ne babarima Yonatan wu ne Awurade asraafo ne Israelman sɛ wɔn mu pii wuwuu saa da no.
13Na Dawid bisaa aberante a ɔbɛbɔɔ wɔn saa amanneɛ no se, “Wufi he?”
Na obuae se, “Meyɛ ɔhɔho Amalekni a mete mo asase so.”
14Dawid bisaa no se, “Na wunsuro sɛ wukum obi a Awurade asra no no?”
15Dawid ka kyerɛɛ ne mmarima no mu baako se, “Kum no!” Enti ɔbarima no twee nʼafoa de wɔɔ Amalekni no, kum no. 16Na Dawid kae se, “Wʼano ayi mmusu ama wo ama woawu, efisɛ wo ara na wokae se woakum obi a Awurade asra no no.”
17Na Dawid too kwadwom maa Saulo ne Yonatan. 18Na ɔhyɛɛ sɛ wɔnkyerɛ nnipa a wɔwɔ Yuda nyinaa to. Wɔtoo no din sɛ agyan dwom a wɔakyerɛw wɔ Yasar Nhoma mu.
19“Wʼanuonyam ne wʼahosɛpɛw, Israel, awu da mmepɔw so!
Akofo akɛse atotɔ!
20“Monnka asɛm yi wɔ Gat,1.20 Gat ne Askelon yɛ Filisti nkurow.
na Filistifo abɔ ose!
Monnka wɔ Askelon mmɔnten so,
na abosonsomfo anserew ahosɛpɛw mu.
mma obosu anaa osu ntɔ ngu wo so
anaa wo nsian so.
Efisɛ ɛhɔ na woguu ɔkofo kɛse no akokyɛm ho fi;
wɔremfa ngo nsra Saulo nkatabo ho bio.
22“Saulo ne Yonatan kunkum wɔn atamfo ahoɔdenfo!
Wɔamfi akono amma no nsapan.
wɔn mu antetew da, nkwa ne owu mu.
Na wɔn ho yɛ hare kyɛn akɔre;
na wɔn ho yɛ den kyɛn gyata.
efisɛ ofuraa mo ntama pa,
hyehyɛɛ mo sikakɔkɔɔ agude.
25“Akofo akɛse atotɔ akono.
Yonatan awu da mmepɔw no so.
26Misu wo, me nua Yonatan!
Na wosom me bo yiye.
Na wo dɔ a wowɔ ma me no yɛ nwonwa;
emu dɔ sen ɔbea dɔ!
27“Hwɛ sɛnea akofo akɛse atotɔ!
Ɔko mu akode ayerayera!”
AKCB : 2 Samuel 1